Fiaraha-miasa amin’i Sina: nahazo fitaovana iadiana amin’ny covid-19 ny CUA | NewsMada
Fiaraha-miasa amin’i Sina: nahazo fitaovana iadiana amin’ny covid-19 ny CUA
Mitohy ny fiaraha-miasa sy fiaraha-mientana iadiana amin’ny covid-19. Nahazo fitaovana samihafa avy amin’ny fitondrana Sinoa ny CUA, tamin’ny alalan’ny masoivohony eto amintsikak. Ahitana arovava orona ho an’ny mpiasan’ny fahasalamana sy karazana arovava orona KN95 izany. Eo koa ny solomaso fiarovana sy fitaovana samihafa fiarovan-tena ho an’ny tsirairay. Tonga nanolotra izany tamin’ny ben’ny Tanàna, Andriantsitohaina Naina tetsy amin’ny lapan’ny Tanàna, Analakely.
Fanohan’ny sehatra tsy miankina
Tonga nanolotra fitaovana fiarovana amin’ny valanaretina ho an’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra ny avy amin’ny orinasa “Sociétè Malgache de Propreté – Somapro” sy ny ny “Best Foam”. Anisan’ny nitarika izany lanonana tsotra izany tetsy amin’ny lapan’ny Tanàna Analakely, Andriantsitohaina Naina sy ny tale jeneralin’ny Somapro, i Hajidjivan Missan.
Anisan’ny fitaovana sy kojakoja iadiana amin’ny covid-19, natolotra tamin’izany ny “Gel hydroalcoolique”, miisa 10 baoritra, “Solution liquide hydroalcoolique” miisa 15 “packs de 12”, ny “Gel hydroalcoolique en sachet 20” anaty baoritra miisa 12. Eo koa ny “Support mural pour GHA 500ml – 50 unités » sy ny “Masques en tissus” miisa 1 000 ary ny “Gel hydroalcoolique” 5 litatra – 20 unités ». Manampy izany ny « Nettoyant javel 5 kg – 50 unités ». Ankoatra izany, nanolotra kidoro miisa 30 ho an’ny CUA ihany koa ny orinasa Best Foam.